Kwatingaona Kisi yeKrisimasi Inoratidza muReno Area
Nyika dzakabatana Nevada Reno & Tahoe
Krisimasi Mwenje Inoratidza muReno uye Sparks
Krisimasi Inopenya Zvakanaka muReno uye Sparks
Mwenje dzezororo reKrisimasi dzinovhenekera nzvimbo dzakawanda dzekugara, mabhizimisi, uye nzvimbo dzepaguru dzakapoteredza Reno neSparks. Iyo inofadza uye inoita basa remhuri kuitira kuti uende kunze kwemanheru masikati uye unakidzwe zvimwe zvemavara eKrisimasi anowanikwa munzvimbo iyi.
Guta nekutengesa Chiedza cheKrisimasi Chiratidzo
Reno's Holiday Christmas Tree - Gore roga roga, guta reReno rinotanga muti kuburikidza nemwaka wezororo reKrisimasi . Nzvimbo yaro yemazuva ano iri mudhorobha reReno pakona yekutanga naVirginia Migwagwa, munzvimbo iri pakati peTrickee River uye City Hall.
Ichando rink, iyo yaimbova pano, ikozvino "Downtown Reno Ice Rink paAces Ballpark."
Inotaurira Mhemberero dzeMunharaunda - Guta reSparks rinopa Mutambo wegore negore weHometowne Krisimasi kuburikidza nemwaka wezororo. The Sparks Community Community Tree is Christmas at Amphitheater Saint Victorian Avenue, uye kune mhemberero yemiti. Mhemberero yekuvhenekera ndiyo manheru pamberi peSparks Hometowne Krisimasi kupemberera uye kupemberera. Kwemwaka wegore rino, mapurisa ekushanda, uye mamwe mashoko anotarisa Guta reSparks website.
Zvitsuwa zveSparks - kuburikidza nemwaka wezororo. Izvo Zvitsuwa paSparks zvakanyatsorasirwa kunze kwemazororo eKrisimasi. Muti mukuru weKisimusi uye kukorongedzwa kwekunze kunowedzera kuzviratidziro zvauchawana muzvitoro zvose. Iwe haufaniri kutenga chero chinhu kuti ufare Krisimasi cheer. Kunze kwezviedza, kuchava nehotera yakawanda yekusimudzirwa uye mamwe mabasa. Zvitsuwa zveSparks zviri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweI80 uye Sparks Boulevard kuSparks.
Kuti uwane mamwe mashoko, taura (775) 358-3800.
The Summit Reno - munguva yezororo. The Summit nzvimbo yekutengesa yose yakavhenekera kwemazororo. Inzvimbo yepakati inosanganisira muti mukuru weKrisimasi wakatarwa pedyo nejeri remoto wekunze kuti uchengetedze. Ikoko mwenje nemarongero mukati mese mall.
Iyo Summit iri kumaodzanyemba Reno pakona yeSouth Virginia Street uye kuMat. Rose Highway. Kuwedzera kune nguva yechando, chando cheMat. Rosi inotarisa munzvimbo yacho kumadokero. Kuti uwane mamwe mashoko, taura (775) 853-7800.
Mamwe Krisimasi Light Anoisa muReno uye Sparks
Mwenje yeTanea - The Biggest Little Christmas Chiratidza Reno muReno - Kwemakore anoverengeka, nechekumaodzanyemba kweReno musha weTanea Drive yakabata hurukuro huru yegurisi yakakwana nemimhanzi yakanyatsoenderana. Zvisiri-pane-zvinoparara zvokudya zveEvelyn Mount's Outreach Program uye zvipfeko zvinogadziriswa uye mari yemari ye Friends of Multiple Sclerosis. Boka rinotarisa kuratidzwa rinogona kana kuti risingave richienderera mberi netsika mumakore anouya; chengetai webhusaiti yavo kuti uwane mamwe mashoko
Hidden Valley Parade of Lights - Kwemakore anopfuura makumi matatu, varidzi vepamba vakaisa Krisimasi chiedza kuratidzwa muHidden Valley mhiri kumabvazuva kweReno. Izvi chaizvoizvo makwikwi ehurumende yeimba, asi vanhu vanokokwa kuti vauye uye vafarire mazororo ezororo. Kune dzimba dzakawanda dzakashongedzwa, saka tarisa zvakapoteredza kana uri munharaunda iyi. Tora Pembroke Avenue kumabvazuva kubva kuE McCarran Boulevard uye enda kuRosewood Lakes Golf Course kuti upinde munharaunda.
Mamwe Krisimasi Light anoratidza munzvimbo dziri pedyo
Hurumende Muti weKisimusi mu Carson City - Mavhu eNevada ehurumende capitol anovhenekera nguva yezororo nemuti mukuru uye zvimwe zviratidzo. Kune zviedza zvakawanda zvekunakidzwa nekukomberedza Carson City zvakare.
Candy Cane Lane kuCotonon Valley Inn - Ichi ndicho chinotyisa-chechi yeKrisimasi chiedza, kuratidzika usiku hwose kutanga neChirongwa cheKutenda. Candy Cane Lane rine zviuru zvezviedza zveKrisimasi uye mifananidzo yakasiyana-siyana inoratidzira tsika dzevanhu nemifananidzo kugadzirira uye kufara Krisimasi. Maererano nemimhanzi inogona kunzwika nekugadzira motokari yemotokari ku 89.9 FM. The Carson Valley Inn iri kuUnited States 395 muMallen, Nevada, pedyo nekutangira State Highway 88.
Mukuwedzera kune izvi "hurumende" kuratidzira, varidzi veminda vakawanda vanoita zviratidzo zvakasiyana-siyana uye zvinoshamisa mumashure avo uye kumashure.
Ramba uchitarira pamapepa emunzvimbo uye mawebsite kuti uwane ruzivo pamusoro pezvinofanira kutarisa gore rino!
Kufamba Mug. Rose
Kuvaraidza paMigwagwa yeMugwagwa Kuwa Rally muReno neSparks
Halloween Costumes uye Zviwanikwa muReno
Nzvimbo dzepamusoro dzevana 'Birthday Party muReno neSparks
Nzvimbo Dzakasununguka Dzepamusoro Dzakanyanya Kuderedza Reno / Tahoe
Best Spas muNew Jersey
Yakanakisisa Yokufambisa Waini yeFrance? Machipisi
Meersburg, Germany Kuronga Mazano
Top Maps yeSpain nePortugal - Michelin Road Maps yeSpain nePortugal
Amai Day Day Brunch paChirungu Grill
9 Zvinhu Zvokuita muZimbabwe Finger Lakes, New York
Maviri-Week Central America Vacation Ideas
Kiliwatch Concept Shop muParis
Top 10 Zvikanganiso Vatashanyi Vanoita muItaly
Mazano eSkagit Valley Tulip Festival Vashanyi
Mufaro Unosvika sezvo Euro 2016 Ichizivisa Tendeti yeThikiti
SoHo Metropolitan Hotel Toronto: Hot Location uye Scene Restaurant
PUB 1842 paMGM Grand Las Vegas